Mirongatra ny asa fampihorohoroana any Frantsa: olona telo maty voatsatoka antsy tany Nice | NewsMada
Mirongatra ny asa fampihorohoroana any Frantsa: olona telo maty voatsatoka antsy tany Nice
Olona telo namoy ny ainy, maty voatsatoka antsy, tao amin’ny fiangonana Basilique Notre-Dame de l’Assomption, any Nice, omaly tokony ho tamin’ny 9 ora maraina. Vehivavy ny roa ary lehilahy mpiambina ilay fiangonana ny fahatelo.
Manodidina ny 70 taona any ho any ny iray amin’ireto vehivavy namoy ny ainy. Maty voarasa antsy, tahaka ny nahazo an’i Samuel Paty, ilay mpampianatra, tantara sy jeografia tao amin’ny kolejy Bois d’Aulne, Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), ny 16 oktobra teo. Mbola afaka nitsoaka kosa ilay vehivavy fahatelo, 30 taona eo ho eo, saingy nilofika ary namoy ny ainy, noho ny ratra mafy nahazo azy.
Tovolahy, manodidina ny 25 taona, miendrika Afrikanina Tavaratra, mahay miteny frantsay tsara, ilay nahavanon-doza. Nandritra ny namonoany ireo olona telo ireo, tsy nitsahatra niantsoantso “Allah Akbar” izy. Azo an-tsaina amin’izany ny mety ho foto-pinoana arahiny. Voasambotra ihany izy io, saingy naratra mafy noho ny tifitra nataon’ny polisy azy, ary nentina notsaboina tany amin’ny hopitaly.
Adiny roa taorian’io tranga io, nisy fikasana hamono olona tamin’ny alalan’ny tsatoka antsy ihany koa tany Avignon, saingy nandamoka. Maty voatifitry ny polisy frantsay mantsy ilay tompon’antoka, raha iny izy teo am-panambanana antsy olona iray iny indrindra.
Araka izany, mihorohoro fatratra amin’ny asa fampihorohoroana izay tsapa fa mirongatra dia mirongatra tokoa ny vahoaka frantsay tato ho ato.